When you go toadoctor, he or she may say you need medicine. Medicine is called ဆေးဝါး or sometimes မူးယစ်ဆေးဝါးများ USA တွင်. Doctors write medical prescriptions for medication that will help you. You can take the medical prescription to your local drugstore, or pharmacy.
Medicines are substances that cure sickness and disease. Sometimes they help to stop symptoms when you are ill. Americans call medicine “medications” သို့မဟုတ် “မူးယစ်ဆေးဝါးများ။” Sometimes they say “ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ” သူတို့တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့.
A pharmacy isaplace that prepares medical prescriptions and sells medicines. You can tell your provider the name and address ofapharmacy that is convenient for you. အားလုံးဆေးဆိုင်, အများအပြားဆေးရုံများနှင့်ဆေးခန်းများ, တချို့စူပါမားကက်ဆေးဆိုင်များရှိ.
သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးသင်သည်သင်၏ဆေးယူဖို့ဘယ်လိုနားလည်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သင့်တယ်. သငျသညျရှုပ်ထွေးနေဆဲသို့မဟုတ်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်သံသယရှိပါက, မေးမြန်း! သူတို့သည်သင့်ကိုနားလည်ကူညီပေးလိုပါလိမ့်မယ်.
အချို့ကိစ္စများတွင်, ဆရာဝန်တစ်ဦးအကြံပြုစေခြင်းငှါ “ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော” ဆေးဝါး. Over-the-counter-medications are medicines for which you don’t needaprescription. You can simply walk into any drugstore and buy them.
brand name ဆေး တိကျတဲ့ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုအောက်တွင်ပိုင်နှင့်စျေးကွက်ဖြစ်ကြောင်းဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း. သူတို့ဟာမကြာခဏအသစ်များမူးယစ်ဆေးများမှာ (ဆေးဝါးများ), သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအထူးပြုအခြေအနေများများအတွက်.
generic ဆေးဝါး are cheaper versions of brand-name medications that work the same as their brand name counterparts. ထိုကွောငျ့, သင့်ဆရာဝန်သင်တစ်ဦးဆေးကုသမှုများအတွက်ဆေးညွှန်းရေးသားခဲ့သည်လျှင်, သင်ပိုက်ဆံကယ်တင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကမေးပါများနှင့်ရရှိနိုင်မယ့်ယေဘုယျဗားရှင်းရှိလျှင်ကြည့်ဖို့များသောအားဖြင့်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးင်.
Always follow your doctor’s instructions regarding your medical prescriptions. ဒီနေရာတွင်အတိုင်းလိုက်နာရန်အဘို့အအချို့သောရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်:
သငျသညျယူသမျှသောဆေးဝါးများရေးချ, သူတို့ဆရာဝန်တစ်ဦးတို့ကဒါမှမဟုတ်သူတို့ over-the-counter ဆေးဝါးများလျှင်သတ်မှတ်သည်ရှိမရှိချရေး.
သူတို့ကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်ပုံကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကိုမေး, ထိုကဲ့သို့သောရေနှင့်ဝသကဲ့သို့, အစားအသောက်နှင့်အတူ, သို့မဟုတ်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်.